Ukhuthaza inkuthalo ocansini kwabashadile umfundisi | Isolezwe
Ukhuthaza inkuthalo ocansini kwabashadile umfundisi
Izindaba / 14 February 2018, 11:16am / ZANELE MTHETHWA
UKHUZA umkhuba wobuvila ekamelweni kwabashadile uMfundisi Zodwa Dlamini, odume ngokweluleka ngezothando nomshado nomyeni wakhe uMfundisi Rodney Dlamini bebandla, iKingdom Life Tabernacle eMusgrave, eThekwini, asebeshade iminyaka engu-24
UKHUZA ukuncishana ngocansi kwabashadile umfundisi ongumeluleki wezothando odume ngezinkulumo ezakhayo, othi lokhu kuba nomthelela omubi ebudlelwaneni babashadile.
UMfundisi Zodwa Dlamini uthe ukungakhulumi ngocansi emshadweni kwenza ukuthi abantu bagodlelane, omunye angakwazi nokusho akuthandayo nangakuthandi. Yize ethi kuningi nokunye okulimaza imishado, ucansi uthe lunendawo enkulu oluyidlalayo.
“Ucansi akukhulunywa ngalo ngenxa yesiko lethu labamnyama kanti lokhu kudala izinkinga kwezothando. Lokhu kwenza ukuthi ngisho abantu sebeshadile bakubalekele ukukhuluma ngocansi. Lena yindaba esikhathaza kakhulu nomyeni wami, okwenza ukuthi sithande ukuyikhuluma nentsha esazoshada. Sinamakilasi lapho sifundisa khona sijule ngalesi sihloko kwabashadile ngoba uma kungakhulunywa, mukhulu umonakalo ozokwenzeka,” echaza.
Ukhala nangobuvila ekamelweni athe kwenza abanye bagcine bebheka ngaphandle ngisho beshadile. Uthe abashadile kumele bavulelane izifuba ngemizwa yabo yocansi futhi nowesifazane unelungelo lokuzicelela.
UMfu Dlamini uveze nokuthi abashadile akumele baqhathanise abashade nabo nasebeke bathandana nabo phambilini. Uthe okubalulekile ukuzibophezela ekwakheni ubudlelwano obuhle emshadweni.
Uthe kuhle ukuzijwayeza ukuzikhipha, okungasho ukuthi kumele kuchithwe imali enkulu. Okunye akhale ngakho emshadweni ukunganakani, ukusolana phambi kwezingane, ukungalalelani nokuhlala ngokuqhelelana.
Ukhuthaza ukuthi abashadile babe nesikhathi esiningi ndawonye, bajwayele ukushintsha umoya ukuvuselela uthando.
Mayelana nokushabalala kwamathemba okushada kwabangakashadi ikakhulukazi abesifazane, uthe ayikho iminyaka ebekiwe yokushada.
“Uma unesifiso sokushada ungawuthola umshado ngisho usuneminyaka emingaki. Kunabantu abashada sebebadala kungasalindelwe. Kukuyena umuntu ukuthi ucabanga kanjani futhi angazifakeli ingcindezi kube sengathi uselindele ukuthatha noma yini.
UMfu Dlamini useshade iminyaka engu-24 nomyeni wakhe uMfundisi Rodney Dlamini babusiswa ngamadodakazi amabili nendodana. Bangabasunguli bebandla iKingdom Life Tabernacle eThekwini. Badume ngokwenza izithangami zentsha ngokuhlukana ngobulili, izingane, abashadile nasebezoshada.